Umhla My Pet » 5 Dog Friendly Ideas Kuba Usuku lokuqala
ukubuyekezwa: Apr. 04 2020 | 2 min ukufunda
Ukuba ingcamango umhla wokuqala ezaliswe elide, izinqumamisi, kunzima yaye iincoko ukuba uyayeka phambi kokuba uqale ungenamdla kuwe, bayiqwalasele uceba umhla wokuqala oquka izinja kunye nomhla wakho. Ukuzisa izinja yakho ukugcina mthulise kusenokubanzima Bay kunye akunike yokuzihlolisisa ngaphakathi kwiziko ubuntu bakho. Kodwa phi na ukuba uhambe? Khawuqwalasele ezi zimvo ezintlanu umhla dog-friendly.
Wasoloko esesithebeni inja-friendly yokutyela: Hlasi wayesitya yokutyela yimbono kakuhle ecela ngomhla wokuqala. Ngoko kutheni ukudibanisa twist kuyo ukutya inja-friendly yokutyela? Ukuze ufumane inja-friendly yokutyela kwindawo yakho, ukusebenzisa kwinjini yakho yokukhangela ozithandayo okanye cela oyithandayo yakho inja kwama azigcinele amacebiso.
Yiya kwikonsathi yangaphandle: Nokuba nto nokudanisa neqweqwe band ukudlala hits of bands ethandwayo okanye ukuphula-okhestra kwigumbi ukudlala umculo classical, abazimase kwikonsathi ngaphandle ngomhla wokuqala yindlela kakhulu ukubandakanya izinja zakho. Ukuba kuyenzeka, azise engobozini zepikniki ufake ephatha inja-friendly, kakhulu. Nje qinisekisa kwindawo khonsathi ivumela izinja; akufuni ukuba kufika pooches yakho ukufumana kuphela abanako ukuya.
Phonononga isixeko zakho ngeenyawo: Ukuba imozulu lwamkelekile, bayiqwalasele yokuhlangana kunye nezinja bakho yophawu ababekekileyo emane ummandla. Kuhamba ngendlela azive ukuba ukwazi ezinye ngexesha ngalinye ngokunika izinja yakho yemisebenzi yabo. Musa ukulibala iingxowa poop!
Adibane epakini inja: Kuba umhla wokuqala ongathandani yaye ngokukhawuleza, bacebisa yokuhlangana nezinja zakho epakini inja basekuhlaleni. Wena izinja zakho uzilolonge ngoxa udlala umdlalo ibhola. Ukuhlangabezana epakini inja ugcina umhla khaphu-, kakhulu; ukuba uvana ungabikho, uyakwazi nesicebisa kwesihloko ngenxa isidlo, kodwa xa iintlantsi musa kanye ukubhabha, uyakwazi intloko nje ekhaya. Gcina amanzi asebhotileni esandleni wena inja yakho, kwaye mhlawumbi ezinye elinyanga lwezinja zakho. Phambi kokuba ubambe ukuba ndingenzeli kunirhintyela;, nangona, khangela kuqala ukuze ubone ukuba park inja nokufuna ilayisenisi eyodwa okanye tag, okanye ukuba kufuneka uhlawule imali kwangaphambili.
Yiya ekliniki inja: Nokuba oko iklasi neencam nokuzilungisa okanye udidi fitness nenja yakho, ukuya ekliniki inja-zijolise umhla wakho yindlela kakhulu ukwazi omnye komnye ngokukhululekileyo kwaye bekhululekile. Ukuze ufumane ekliniki inja kwingingqi yakho, ungaqala ngokujonga yokugcina izilwanyana okanye sisodwa dog evenkileni yakho yobulali.
Xa becwangcisa isifundo umhla wokuqala ukuba nomntu nenja yabo, qinisekisa baziva bekhululekile ukuzisa Canine babo. Ezinye izinja usenokungavumi kwi zihlwele okanye nezinye nezinja.
Njani ukuba lungathandani Safe